Xubuntu 13.04 Post rakibida & Hagaajinta Guud | Laga soo bilaabo Linux
gnome erectus | | Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
Waxaan diyaarinayay kumbuyuutarkeygii ugu weynaa waana ku faraxsanahay sida ay u shaqeyso waxaan rabaa inaan idinla wadaago. Taasi waa sababta aan ugu rakibey nadiifiye laptop-ka tijaabada ah Xubuntu 13.04 oo waxaan kuu sharixi doonaa sida looga dhigo mid la isticmaali karo oo aan ula jaanqaadi karo sida aan jeclahay.
MUHIIM: Ma haysto runta dhabta ah. Hawlaha dib-u-dejinta ka dib waa kuwo shaqsiyadeed, qof kastaa wuxuu u sameeyaa qaabkiisa gaarka ah waxaana suurtagal ah in waxyaabaha halkan lagu sharraxay qaarkood aysan ku habboonayn sida aad u isticmaasho PC-ga. Ka bood iyaga iyo saaxiibbo 😉
Aynu ku bilowno nidaam cusub oo rakibmay.
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan sameyno waa cusbooneysiinta nidaamka:
Tan ka dib iyo ka hor inta aan dib loo bilaabin markii ugu horeysay, waxaan u tagnaa maareeyaha qaabeynta iyo gudaha, taageerada luqadda. Waxay nooga digi doontaa in taageerada luuqadu aysan si buuxda u rakibnayn markaa, rakib. Waxaan dib u bilaabay.
1 Ku rakibidda barnaamijyada
1.1 xubuntu-xaddidan-siyaado ah:
1.5 Maamulaha Y-PPA:
1.11 QOF KASTA:
2.1 Ha u dhaqaaqin daaqadaha goobta shaqada ee soo socota markaad ka jiideyso shaashadda:
2.2 Ka jeex jeex jeexista marka aad daaqadaha wareegeyso ama aad fiidiyow garaaceyso:
3 Muuqaalka Muuqaalka:
3.1 Liiska Whisker:
3.2 Qeybta hoose:
6 Faahfaahintii ugu dambeysay
6.1 Dhexdhexaadinta kombuyuutarka kumbuyuutarka:
Ku rakibidda barnaamijyada
Sharaxaadda codsiyada ka dib waxaad heli doontaa koodhka si aad wax walba ugu rakibto hal mar. Haddii aadan xiiseyneynin wax dalab ah, ka saar oo tag.
Xirmooyinka aasaasiga ah ee aniga, kumbuyuutarkayga shaqsiga ah (oo aan ka tago kuwa gaarka ah ee shaqada) waa kuwan soo socda:
Ku rakib koodhadh xaddidan (mp3, xarfaha MS ...)
Nooca Terminalka ee soo baxa oo ka dhuumanaya shaashada dusheeda. Badanaa waxaa hawlgeliya F12. Aad u faa'iido badan haddii aad isticmaasho qunsuliyadda wax badan
Xubuntu wuxuu ku yimaadaa qaab ahaan abi erey y GnumericAnigu shaqsiyan sifiican uma jecli iyaga, markaa aan ka saarno oo aan ku darno keydka LibreOffice si loo rakibo:
Haddii aad u baahan tahay inaad keydiso meelo badan, tani waxay kaa caawin doontaa inaad maareyso iyaga.
Si aad u qaadatid shaashadda
Ciyaaryahanka ugu fiican ee fiidiyowga ah.
U oggolow barnaamijyada aad inta badan u isticmaasho inay si dhakhso leh u xajiyaan:
Waxaan haystaa ururinta muusikada wanaagsan ee kumbuyuutarkeyga, laakiin dhawaanahan waxaan xoogaa u wareegayaa si Spotify uu u noqday ciyaaryahankeyga caadiga ah.
Haddii aad xiisaynayso inaad ku rakibto dhammaan barnaamijyadan hal mar, ku qor tan qunsulka:
Tanna waxaan horeyba uga tagnay kombuyuutarkeena qaar ka mid ah barnaamijyada aasaasiga ah.
Hadda, ka dib dib-u-habeyn loo qalmo ka dib, aan ku ciyaarno XFCE xoogaa.
In kasta oo XFCE ay dhalaashay, haddana waxaa jira waxyaabo aanan aad u jeclayn sida ay u shaqayso (daaqad ka qaadista shaashadda ayaa beddelaysa goobta shaqada, dhibaatooyinka jeexjeexa ... iwm). Waxaan isku dayeynaa inaan wax walba hagaajino. Waan bilownay.
Ha u dhaqaaqin daaqadaha goobta shaqada ee soo socota markaad ka jiideyso shaashadda:
Waxaan u tagnaa maareeyaha qaabeynta, maareeyaha daaqada, tab horumarsan.
Inta lagu guda jiro socdaalka meertada ah ee goobaha shaqada, waxaan baaray "U bood goobta shaqada ee xigta markii aad daaqad u jiideyso bannaanka goobta shaqada ee hadda"
Ka jeex jeex jeexista marka aad daaqadaha wareegeyso ama aad fiidiyow garaaceyso:
XFWM ma laha ikhtiyaar ay ku kiciso vsync asal ahaan, taas oo ah waxa lagu xalliyo guuldaradan, markaa si aan u xallino waxaan ku dhejin doonnaa nooc la beddelay.
Dib u bilow pc-ga iyo terminal-ka furan (oo aan xidid ahayn):
Dhibaatada la xaliyay.
Dhawaan menu-kan ayaa soo baxay, kaas oo aad loogu baahnaa desktop-ka sida XFCE. Si loo rakibo:
Marka la rakibo, waxaan ku gujineynaa batoonka badhanka midig, waxaan aadeynaa qeybta oo guji Ku dar waxyaabo cusub. Waxaan dooranaa Liiska Whisker oo waxaan dhigeynaa qeybta bedeleysa menu-ka XFCE.
Waxaan jecelahay inaan haysto baarka leh codsiyada xagga hoose. Waxaan ka saareynaa qaabka loo yaqaan 'Mac-style panel' oo waxaan hoos u dhigi doonaa kan ugu sareeya. Aan tagno Maareynta qaabeynta »Guddi.
Waxaan xulaynaa qaybta 1 (qaabka guud ee guddiga la xushay waxaa lagu calaamadeyn doonaa casaan) waana tirtirnaa.
Hadda waxaan dooranay ah guddiga 0 y waxaan baaray Guddi quful.
Hadda waxaan gujin karnaa midkoodna labada daraf ee guddiga oo aan u jiidan karno xagga hoose. Marka la dhigo, mar labaad ayaan qufulnaa.
Waxaan jecelahay inaan ka tago guddiga waxoogaa ka sareeya, markaa isla qaybta aan ka siiyay cabirka safka 30
Tani waa tan ugu shaqsiyeed wax walboo aan halkaan kuqoray. Waxaa jira dad jecel mawduuca Greybird de Xubuntu iyo dadka doorbida kan Manjaro keeno. Arrinka dhadhanka.
Haddii aad rabto inaad mawduuca Manjaro ku hayso Xubuntu waa inaad tan sameysaa:
Marka hore waxaan rakibnaa git maadaama ay lagama maarmaan tahay in la soo dejiyo mawduuca.
Oo hadda haa, si qasan.
Hadda waxaan aadeynaa Goobaha »Maamulaha Daaqadda oo xulo cinwaanka« Adwaita-manjaro-dark »
iyo sida muuqata, isla mawduuca iyo astaamaha «Faenza-green»
Waxaan aadeynaa doorbidida terminal. Muuqaalka iyo midabada gudaheeda, waxaan uga tagnay sida shaashadaha soo socda.
oo ay weheliso asal raacsan, kani waa natiijada:
Faahfaahintii ugu dambeysay
Ugu dambeyntiina, waxaan rabaa inaan diirada saaro toobiyeyaasha kumbuyuutarrada ee nolosheenna aad u fududeeya.
Dhexdhexaadinta kombuyuutarka kumbuyuutarka:
Waxaa laga yaabaa inaan si fiican isku sharixi karin cinwaanka, laakiin waxaan isku dayi doonaa in la i fahmo ... Dhamaan laptop-yada waxaa ku yaalliin furayaal gaar ah oo kor loogu qaadayo ama loo dhimayo mugga, u dhexeeyo heesaha, ciyaar / hakad.
Furayaashani kama jiraan bad boodhadhka caadiga ah (kuwa dhaqameed ee miisaska), laakiin furayaal isku dhafan ayaa loo xilsaari karaa inay sidan sameeyaan.
XFCE waa waxoogaa gaar ah oo tan ku saabsan. Weli ma aanan helin toobiye caalami ah oo ii oggolaanaya inaan ka boodbo heesaha iyadoo aan loo eegin ciyaaryahanka ku jira XFCE.
Hadda waxaan ku tusi doonaa sida loo qoondeeyo furayaasha kor u qaadista iyo hoos u dhigista mugga iyo kontaroolada si loo ogaado.
Waxaan jeclahay CTRL + WINDOWS + waxkastoo isku jira si loo xakameeyo codka. Mid kasta oo doorta iskudhafka furayaasha ee uu isagu ugu jecelyahay.
Waxaan u tagnaa maareeyaha qaabeynta / kumbuyuutarka / habka loo soo gaabiyo
Waxaan gujineynaa badhanka kudarista. waxaan dhignaa amarka waana aqbalnaa. Hadda waxaan riixnaa iskudhafka furayaasha aan dooneyno amarkaas. Sax ma tahay?
Waxaan kaaga tagayaa liiska amarrada iyo shaqadooda:
Kor u qaad mugga: amixer wuxuu dhigay Master 3% +
Volume Hoose: amixer wuxuu dhigay Master 3% -
Spotify soo socda: dbus-dir –print-reply –dest = org.mpris.MediaPlayer2.spotify / org / mpris / MediaPlayer2 org.mpris.MediaPlayer2.Player.Next
Spotify hore: dbus-dir –print-reply –dest = org.mpris.MediaPlayer2.spotify / org / mpris / MediaPlayer2 org.mpris.MediaPlayer2.Player.Previous
Muuji ciyaar / hakad: dbus-dir –print-reply –dest = org.mpris.MediaPlayer2.spotify / org / mpris / MediaPlayer2 org.mpris.MediaPlayer2.Player.PlayPause
Gawaarida kumbuyuutarka ee loogu talagalay menu-yaraha (furaha daaqadaha): xfce4-popup-whiskermenu
Taasna waxaan ku joojiyay qoraalkeygii ugu horreeyay. Waxaan rajaynayaa in si uun ama si ka yar ay kuu anfacday !!
Tilmaam tuuryo https://wiki.archlinux.org/index.php/Spotify
Wax badan oo ku saabsan Whisker Menu: http://www.webupd8.org/2013/07/whisker-menu-update-brings-support-for.html
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Xubuntu 13.04 Post rakibida & Hagaajinta Guud
Qoraal aad u wanaagsan! Soo dhawow.
gnome erectus dijo
Ku jawaab gnomoerectus
Fudud, toosan, wax ku ool ah, wax cusub ama sheeko cusub. Xaqiiqdii waxay u adeegi doontaa kuwa badan. Hambalyo. 🙂
Uga jawaab duck
Talo iga socota, rakib cusboonaysiinta manjaro waxaadna yeelan doontaa natiijo isku mid ah daqiiqado 😀
Ku jawaab manjarero
Sidii aan ugu jawaabey Yoyo, waxaan ku mashquulsanaa macmacaan, haddii aysan ahaan laheyn xaqiiqda ah inaan u baahanahay inaan ku soo laba-jabiyo jawiga shaqada guriga waxaan u badiyaa inaan aad u isticmaali lahaa. Sikastaba xaalku ha ahaadee, waqti badan ayaan ku qaatay diyaarinta jagada, laakiin markaan dib u rakibo stall. waa daqiiqado 😉
WoooooW hadduusan ahaan laheyn waxaan isticmaali Manjaro waan rakibi lahaa… .. laakin adigu waad soo daahday.
Muddo ayaan ku dhex mashquulayay manjaro runtuna waxay tahay waan jeclahay sida ay u muuqato, laakiin shaqada waxaan u isticmaalaa Ubuntu waana xanuun in la rakibo dhammaan baakadaha iyo dhammaan qaabeynta aan guriga ku haysto. Qoraalkan waxaan ku qoray waxa ugu aasaasiga ah ee aan sameeyo markii aan rakibo * ubuntu + qaar ka mid ah waxyaabaha lagama maarmaanka u ah xfce + mawduuca manjaro. Waxay umuuqataa dhadhankeyga, sifiican ayey u shaqeysaa, mana ahan inaan madaxayga diiriyo si aan "ugu qaado" wax walba shaqada ilaa guri. Waad ku mahadsantahay faallooyinka!
Mar alla markii codsiyada la rakibo, waad isticmaali kartaa APTONCD ama si fudud u nuqul ka same codsiyada ku jira / var / cache / apt / archives galka, marka xubuntu la rakibo, la cusbooneysiiyo, ka dibna gudaha galka iyo xididka ka soo baxa dpkg -i * .deb iyo wuallaaaaaa horeyba wax walbo waad haysataa. 🙂
Waxay noqon kartaa mid aad u da 'weyn laakiin natiijadu waxay i xasuusineysaa Linux jilicsan ee dadkii hore markay keeneen gnome 2, taasi waxay ahayd waraaqda gidaarka ee ay lahayd, ama aad ayey isugu egtahay
waa salka manjaro 0.8.5. Middaas ayaan u dhigay maxaa yeelay midabka buluuga ah ee xubuntu u keento hab-dhaqankiisu waxoogaa wuu ka baxsanaa meesha. Waxaan reexaanta waxaan kula kulmay qorfe si sax ah ugama jawaabi karo. Sikastaba, xfce ahaan wax xun maahan. Waxaan jecelahay natiijadan inay ka wanaagsan tahay midnimada (oo aanan dhaliilin, sidoo kale waxay leedahay dhibco wanaagsan).
Anigu kama tirtiro GNumeric maxaa yeelay waxaan ka doorbidayaa waxa aan u adeegsado waraaqo. Way ka dheereysaa LO Calc.
Mana rakibo Shutter. Xfce waxay keeneysaa shaashad shaashadeeda u gaar ah waana wax weyn. Waxaa lagu magacaabaa xfce4-shaashadda shaashadda iyadoo la adeegsanayo seddax cabbir waxaad leedahay dhammaan howlaha aad u baahan tahay: -f: Shaashad buuxda, -w: Daaqad, -r: Gobolka. Intaas ayaa igu filan waana haystaa wax badan; wuxuuna ku dhashay xfce4.
Ciyaartoyda, inkasta oo VLC ay tahay mid cajiib ah, taageeradeeda font ee cinwaanada marmarka qaarkood way yartahay (waxay kuxirantahay xalinta filimka si aad u daawato). Aan sharraxaad ka bixiyo: Waxaan sub-hooyga u dhigay (way fiicantahay) laakiin qaraarada qaarkood ee fiidiyowga si aan u arko inay u soo baxayaan sidii pixels madhan gudaha qaybta. Tani waxay igu dhacday aniga iyo VLC weligood mashiinno aan la tirin karin iyo qaabeynno. Xulashadaydu waa SMPlayer, oo aan lahayn dhibaatadan oo si toos ah uga soo degsata rukunka OpenSubtitles (wixii VLC ah waa inaad ku rakibtaa qalab musiibo ah)
Ma aqaano Preload, laakiin soo dejinta waxyaabo aan ku socodsiiyo waqti aan u baahdo waxay dili doontaa RAMkeyga yar ee qaaliga ah, waana sababta aan u isticmaalo Xubuntu.
Sidoo kale ma isticmaalo Whisker. Waxaan isku dayay in cabaar ah, qof walbana wuu ku faraxsan yahay. Laakiin runtu waxay tahay, XFCE waxay keeneysaa nidaamkeeda menu ee kala sarreynta ah. Waad shidi kartaa adoo riixaya Alt + F3 ama Super + R (waxay ku imaaneysaa mid iska caadi ah) Fiiri oo ii sheeg haddii aysan aheyn wax la mid ah Whisker!
Waxaan iskudayaa inaanan isticmaalin waxyaabo ka duwan waxyaabaha dibedda uga imanaya warshadda oo ay la socoto XFCE oo ay sidoo kale fiican yihiin.
Hagaag, iyagu waa ra'yigayga ku saabsan. Anyway post wanaagsan. Mahadsanid 🙂
Sidii aan ku iri bilowga boostada, arinta dib u dhiska waa arin shaqsiyadeed. Qof kastaa wuxuu rakibaa wuxuu isticmaalo, wuxuu yaqaan. Qaab dhismeedkan ayaa si fiican aniga igu habboon, waa kii aan waligay haystay, laakiin waligood waxba iima yeelin inaan ogaado inay jiraan waxyaabo kale, tusaale ahaan xfce4-shaashadda sawir-qaadaha ma uusan ogeyn, waan isku dayi doonaa. Oo ka waran menu-ga aad sheegeyso, runta ayaa ah inay iga tagtay wax yar oo meel ku taal, haddii ay isku egyihiin, mana aanan aqoon. Waxaan qiyaasayaa inay arkeen inay ahayd wax laga faa’iideysan karo oo ay wax ka beddeleen iyagoo ka dhigay menu. Sikastaba xaalku ha ahaadee, xitaa haddii menu-kaasi horey u jiray, waxaan u maleynayaa in dhawaqa uu siinayo xoogaa riix yar 'xfce distros'.
Ogeysiis aad u fiican! dhammaadka usbuuca waxaan ku dhajiyaa xubuntu buugga xusuusta!
Qoraal aad u wanaagsan! wax kasta oo aad ku dari karto Xubuntu way caawisaa! Mahadsanid
Ku jawaab Carlos Bacigaluppo
Boosto aad u fiican. Aan aragno haddii aan heli karo Debian ama Slack + XFCE.
Waxaan rabaa Slackware + xoogaa foorari 😀
Aad u dhammeystiran, aad u xunna waxaan horeyba uga tagay Xubuntu, Debian + Xfce ayaa beddelay.
Qoraal aad u wanaagsan, Mahadsanid! 🙂
Boostada wanaagsan, Xfce waa mid ka mid ah jawiyada desktop-ka ugu-beddelka badan.
Waa run. marka lagu daro, waa tan ugu fudud ee wax laga qaban karo.
Laakiin way adag tahay in la habeeyo, gaar ahaan wax kasta oo ku saabsan codka.
Ah wanaagsan. Si aad ugu raaxaysato ikhtiyaariyada qaabeynta ee loogu adeego saxan lacag ah shirkadda KDE, ayaa la yiri.
Aad baad u mahadsantahay !!… Wax ka socda XFCE had iyo jeer waa loo bogay dadka cusub, wax cusubna marwalba waa la bartaa .. Salaan ka timid Mexico
Ku jawaab McNeto
Waxaad ka heshay xirmada mawduuca boggeyga, XD! (git: //gitorious.org/kikee/xfce-manjaro-theme.git), Waan ku faraxsanahay inay kuu adeegtay adiguna waxaad ku dhejisay boggan aan u arko inay fiicantahay.
Ma garanaysid waxtarka aan ka qaatay jagadaada! oo ha ka welwelin in isha ay ka hooseyso 😉 Mahadsanid!
Waan ogahay, halkan waad wada tihiin sharci oo waad ka dhabtihiin waxyaabahaas, XD!
Waad ku mahadsantahay soo gelinta, fududahay in la fahmo.
Super post wanaagsan ... Waxaan raadinayay wax khafiif ah oo kujira buugyarahayga tan iyo markii aan haystay Kubunutu ... hadana waxaan tijaabinayaa Sabayon oo ay la socoto Mate.
Waxaad kudhowaad igu qancisay inaan dib ugu noqdo oo aan tijaabiyo Xubuntu.
Ma jiraa qof ogaaday in rakibidda Java laba jeer lagu dhajiyay boostada? 😛
run. doqon qalad ah ... waa mahadsanid waxaa jira dad sidaada oo kale ah oo u fiirsada! xD
Gnomoerectus heer sare ah.
Runtu waxay tahay inaan marwalba kula taliyo Xubuntu qoyskayga iyo asxaabteyda bilaabaya adduunkan Linux waana fiicnaan doontaa inaan ka tago kombuyuutarkooda oo si fiican u shaqeynaya!
Haddii aad rabto Xubuntu, iyada oo intaas oo dhan horay loo rakibay iyo wax ka badan, waxaan kugula talinayaa inaad rakibto safar, fiiri oo ii sheeg. http://voyager.legtux.org/
Waxay qabatay dareenkeyga, wey i qabatay. Waan jeclahay Xfce. Hadda waxaan adeegsadaa Manjaro, iyo Ubuntu. Laakiin distoorkan ayaa dareenkeyga qabtay. Waxaan arkay fiidiyowga nooca ugu dambeeyay ee ku saleysan 13.04, iyo runta ayaa ballanqaadaysa.
Waxaan rakibay Voyager; Laakiin markaan bedelo asalka desktop-ka oo aan aado aag kale oo shaqo ah, oo aan dib ugu noqdo aaggii shaqada ee aan asalka ku beddelay, wuxuu dhigayaa kii aan hore u lahaa.
Ku jawaab carlosigls
Waxaan jeclahay qaabka garaafka ee Xubuntu aad uga badan yahay kan Manjaro ...
Saaxiib, sidee si xor ah loogu dhaqaajiyaa astaamaha desktop-ka?
Waa suurtagal, way ii gudbin doonaan xogta
haddii kale heer sare oo mahadsanid
In dhaweyd waxaan fiiro gaar ah siiyay LUBUNTU.
Waxaan ka tagay Netbook si layaableh oo aan ugu mahadnaqayo LUBUNTU 11.10.
Nasiib darrose waan la socon kari waayey noocyadii dambe ee .buntu, maxaa yeelay waxaa jira cilad ku jirta Kernel ama ALSA oo aan ii oggoleyn inaan qaabeeyo codka HDA VIA VT82xx.
Waxaan u maleynayaa in tan fudud .buntus LUBUNTU ay tahay mida aan aad u jeclahay.
Waana inaan aragnaa goorta LXDE iyo RAZOR-QT ay midoobayaan xoogagga.
Si kastaba ha noqotee, inta badan soo-jeedintaadu waxay khuseeyaan Lubuntu marka lagu daro Xubuntu, marka laga reebo dhawr waxyaalood oo u gaar ah XFCE.
Ma aqaan inta uu GNOME ka yar yahay isticmaalka XFCE.
Waa isku mid inta udhaxeysa XFCE iyo LXDE.
Tani muhiim kuma noqon karto mashiinnada awoodda badan, laakiin kuwa aan sidaas muhiim u ahayn, waa.
Sida iska cad wax waliba waa arin dhadhan shaqsi ahaaneed iyo waliba howlo shaqo, waana mudan tahay in la cadeeyo in waxyaabaha aan jeclahay ay runti tahay KUBUNTU.
Ku jawaab dbertua
Maalmahan barta xfce waxay taageertaa "qaabka Quake" iyada oo aan loo baahnayn in wax la rakibo.
Aad baad ugu mahadsantahay tilmaamahan "wax badan" way i caawiyeen.
Maan fahmin qaybtan
Dhab ahaantii waa maxay taasi maxaase loogu talagalay?
Qoraal aad u xiiso badan, wax badan buu i caawiyay !!!
Waa salaaman tahay! Waxaan isku dayay inaan ku dhejiyo mawduucan Xubuntu 14.04 LTS laakiin kuma guuleysan :)
astaan ​​la'aan dijo
Waad ku mahadsan tahay casharkaan, aad u fiican .. waad seegtay tan
Luqadda Isbaanishka ee loogu talagalay libreoffice
sudo apt-get rakib libreoffice-help-es libreoffice-l10n-es
Ku jawaab anonimon
Shaqadaadu way i caawisay waqti fog kahor, hada waxaan dhibaato ku qabaa keydadka ..
Waxaan isku dayay isbedel anigoon helin natiijooyin wanaagsan.
Waxaan isticmaalaa Xubuntu 13.04
W: Awoodin in la helo http://extras.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring/main/binary-i386/Packages 404 Lama Helin
Mar dambe ma cusbooneysiin kartid nidaamkaaga maxaa yeelay taageerada Ubuntu 13.04 iyo waxyaabaha ka dhasha (sida Xubuntu) waxay dhammaadeen bishii Janaayo oo keydadkii waa la iska dhaafay. Waa inaad u guurtaa Xubuntu 12.04 ama Xubuntu 14.04 midkoodna waa kuwa weli haysta taageerada firfircoon. Anigu shaqsiyan waxaan kugula talinayaa 12.04 maxaa yeelay way ka bislaatay oo xasiloon tahay, laakiin 14.04 ayaa ka cusub oo leh xirmooyin cusboonaysiin badan.
Wixii tixraacyo dheeraad ah oo ku saabsan wareegyada taageerada Ubuntu, la tasho jadwalkan: http://es.wikipedia.org/wiki/Ubuntu#Lanzamientos_y_soporte
Australis: Qaabka cusub ee loo yaqaan 'Firefox interface' ayaa soo hagaagaya maalin kasta